डाउनलोड गर्नुहोस् Zoom को लागी Windows
सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस् को लागी Windows (15.00 MB)
डाउनलोड गर्नुहोस् Zoom,
जूम एक विन्डोज अनुप्रयोग हो जसको साथ तपाईं भिडियो कुराकानीहरूमा एक सरल तरीकाले सामेल हुन सक्नुहुन्छ जुन सामान्यतया टाढा शिक्षाको समयमा प्रयोग गरिन्छ र जसमा उपयोगी सुविधाहरू छन् र टर्की भाषा समर्थन प्रस्ताव गर्दछ।
जूम भिडियो कल कसरी गर्ने?
जूम अनुप्रयोग डाउनलोड गरेपछि, हामी प्रोग्राममा डबल-क्लिक गरेर लग इन गर्दछौं। देखा पर्दामा, हामी हाम्रो प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्डको साथ लग ईन गर्दछौं, यदि कुनै छ भने। अन्यथा, हामी प्रयोगकर्ता सिर्जना गर्दछौं।
लग ईन गरे पछि, हामी पर्दामा आउँदो क्यामेरा साइनको साथ नयाँ बैठकमा क्लिक गर्दछौं। यहाँ क्लिक गरेर, केहि विकल्पहरू तल देखा पर्नेछ। यहाँ हामी भिडियो विकल्प स्टार्टको साथ भिडियो विकल्पमा क्लिक गरेर भिडियो कुराकानी शुरू गर्दछौं।
स्क्रिनको तल एक आमन्त्रित बटन छ जहाँ हामी आफैं देख्छौं। यो बटन क्लिक गरेपछि, तपाईंको कोठा साझेदारी विकल्पहरू देखा पर्दछ। यदि तपाईं लि e्क ईमेल मार्फत साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामी स्क्रिनको बिचमा बटन थिच्दछौं। यदि हामी सिधै ठेगाना पठाउन चाहान्छौं भने, हामी स्क्रिनको तल URL प्रतिलिपि विकल्पहरू थिच्दै आवश्यक ठेगाना पाउँछौं।
त्यसो भए हामी यस ठेगानालाई व्यक्तिमा पठाउँछौं जो कुराकानीमा भाग लिन्छन् र हामी कुराकानी शुरू गर्दछौं।
तपाईं कसरी एक जूम भिडियो च्याटमा सम्मिलित हुनुहुन्छ?
जूम प्रोग्राममा खोलिएको भिडियो कुराकानीमा भाग लिनु एकदम सरल छ। सबैभन्दा पहिले, तपाईंसँग कोठाको लिंक ठेगाना हुनुपर्दछ। कोठा खोल्ने व्यक्तिले तपाईंलाई लि a्क ठेगाना पठाउन आवश्यक पर्दछ।
त्यसोभए तपाईं कुराकानीमा सामेल हुनुहोस् केवल एक बैठकमा सामेल हुनुहोस् भन्दै। यदि कोठा एन्क्रिप्टेड छ भने, तपाईंले एक मिटिंग बटनमा शामिल हुनुहोस् बटन थिचे पछि पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
जूम भिडियो कलिंग कार्यक्रम, जुन तपाईं निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, धेरै विवरण प्रदान गर्दछ। तपाईं यस साइटमा जुम सशुल्क सदस्यता लाभहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
डाउनलोड गर्नुहोस्: 9,808